Umvelisi kunye noMboneleli wePhepha leWholeliseli |Ikamva
Fl-PL90PLA 90mm iphephaIsiciko Ifaka i-6/8/12T oz izitya zePhepha 1000(20*50pcs)
Fl-PL97PLA 97mm iphephaIsiciko Ingena kwi-8U/12S/16T oz Izitya zePhepha 1000(20*50pcs)
I-Fl-PL115PLA 115mm Isivalo sePhepha Ifaka i-12/16/24/32 oz izitya zePhepha 1000(20*50pcs)
Umcabaisiciko sephepha.Izitya zeFUTUR ngumxube owahlukileyo kunye noluhlu lomdlalo lweyona ndlela ibalaseleyo kunye nokuguquguquka.Imbono yepanoramic yesibaso sakho sokutya.Isiciko esiphumayo sokutya okushushu ukuhamba.Ibhodi ezinzileyo eneplanti yePLA esekwe kwiplanti.Yenziwe ngezityalo.Icompostable ngokwentengiso apho yamkelwe.
Isicikoiphephayenziwe kwiphepha eliqinisekisiweyo elingenamgcakwaye igqunywe ngeI-PLAi-bioplastic eyenziwe kwizityalo, kungekhona ioli.Izivalo zephepha zifakwe kwi-bioplastic lining eyenziwe kwizityalo, kungekhona ioli.Zikulungele ukutya okushushu nokubandayo kunye nolwelo.Izatifikethi ezivunyiweyo kwimizi-mveliso.
Uninzi olulahlwayoizicikozenziwe ngeplastiki.It ihlala ithatha iminyaka engama-200 ukuze ithobeke ngokwendalo.Itshabalalisa imbonakalo-mhlaba kwaye kunzima ukuzithoba emva kokulahlwa, kubangela iingxaki zexesha elide lokusingqongileyo.Ukuvelisa wethuisiciko sephephasiziphumo kwi80I-% ngaphantsi kweegesi ze-greenhouse kuneplastiki yesiqhelo ethatha indawo yayo.
Sisebenzisa umsebenzi onzima, ibhodi yomgangatho weprimiyamu enika yethuizivalo zephephauzinzo oluphezulu, ukulungeleka ngcono kwesivalo kunye nokugquma.Iphepha lethuisicikoilungiselelwe ngokwethuisitya sephephaubukhulu, bulungele yonke isuphu yethuisitya sephephas & nezitya zephepha ezibanzi.
Zifanelekile zombini ezishushu kwaye zibandayoizitya zephephakwaye zikhuselekile isuphu, ziyindlela ehambelana nokusingqongileyo kunesiqheloiziciko zeplastiki.
Iprintwa kusetyenziswa i-eco-friendly soy-based okanye i-inki esekwe emanzini.Ezi zitya zivundisiwe kwindawo yorhwebo.
Uyilo olutsala amehlo kwisandla somthengi luhlala lubonwa ngabanye.Ifumaneka kuluhlu lobungakanani bomgangatho weshishini, iilidi zethu zephepha zinokuprintwa ngokwezifiso ukukhuthaza uphawu lwakho.
·Ubukhulu obahlukeneyo ukusuka kwi-90mm & 97mm.Ifaka izitya zephepha lesuphu yeFUTUR.
·Iziciko zamaphepha ezinto ezivundisiweyo neziphinda zisetyenziswe.
Ngaphambili: Isitya sephepha leSuphu